Igadi kunye ne-DIY
yokuqalisa >> Igadi
Siyakuthanda Ukulima kwaye njengakuwo nawuphi na umsebenzi, i-DIY ikhoyo. Kunye DIY kwigadi Sibhekisa kwizikhokelo kunye nezifundo ze yenza izixhobo kunye nezinto zegadi yethu.
Into esiyifunayo kukuba xa unombono wegadi yakho, ukusuka ekunkcenkcesheni okuzenzekelayo ukuya kulwakhiwo lweentyatyambo, indlu eluhlaza okanye isixhobo sokuhlwayela imbewu, sukujonga apho ungayithenga khona kodwa jonga apha kwaye ucinge ungayenza njani ngokwakho.
Rhoqo ngonyaka ndinengxaki efanayo negadi. Silungisa umhlaba, sele sityala emva kweeveki ezimbalwa Ukhula okanye ingca emangazayo ithathe yonke into. Ngaphandle koko andinayo itrektara kwaye yonke into kufuneka isetyenzisiwe ngegaba.
Kulo nyaka ndiza kuzama ukusombulula ezi ngxaki zimbini. Ndizamile ukulungisa umhlaba ngokuwugquma ngesigcina-kufuma ndize ndiwushiye ulungele ukulinywa ungalimi. Iziphumo zokuqala, njengoko uza kubona, bezithembisa.
ICayenne, Olunye udidi lwe IsiTshayina seCapsicum Yenye yezona zaziwa kakhulu kwaye isetyenziswa kakhulu iziqholo, mhlawumbi ngenxa yokuba inobushushu obukhulu, iyanyamezeleka kuninzi lwabantu.
Inamagama amaninzi aqhelekileyo: i-cayenne, ipepile ye-cayenne, ipepile ebomvu, ipepile.
Ine-30.000 ukuya kwi-50.000 ye-SHUs kwi Isikali seScoville.
Ngelo xesha Yinto eqholiweyo efanelekileyo inkalakahla esinayo ekhaya. Inika ukurhawuzelela okukhulu kodwa ngaphandle kokugqitha. Abanye bathanda habanero Sele bezokulinganisa kwaye zirhawuzelele kakhulu kwaye UCarolina ovunayoAzicingeki ukuba zisetyenziswe ngabantu, hahaha.
Kulo nyaka ndiyafuna zama iijalapenos.
El ICarolina Reaper okanye iCarolina Reaper yayiyeyona pepper ishushu ehlabathini ngo-2013 ngexabiso lama-2 ee-Scoville Units, nangona uluhlu lwayo oluqhelekileyo luphakathi kwe-220 ne-000 kuxhomekeke isikali se-scoville. Umsindo wokwenene oya kuyenza ingadli. Ngoku kukho ezinye iintlobo zespicier ezinje ngePepper X.
Luhlobo lwe Capsicum chinense ngakumbi i-HP22BNH efunyenwe ngu-Ed Currie kwinkampani Inkampani yePuckerButt Pepper. Ngumnqamlezo phakathi isilwanyana iHabanero kunye neNaga Bhut Jolokia (endandiza kuyithenga kulo nyaka kwi-nursery)
Ingubo yokufudumeza ukuhluma imbewu
Ndisebenzisa i Ukufudumeza ingubo ukuze kuhlume imbewu. Ingubo yombane (yokufudumeza) ephakamisa ubushushu bomhlaba malunga ne-10ºC kwaye ikhawulezisa ukuzalwa kwembewu kunye nokuhluthwa kweengcambu. Ndifumene iziphumo ezilungileyo ngenene ngembewu ye Ipepile yeHabañero. Ukuzenza zihlume kwiintsuku nje eziyi-8
Kukho iimodeli ezahlukeneyo, ukongeza kubungakanani obahlukileyo ngamandla. Kukho ze-17,5W ezihlala ziphakamisa ubushushu be-10% kunye nezo ze-40,5W eziphakama phakathi kwe-10 ukuya kwi-20 degrees. Xa uyifaka kufuneka ulinde malunga nemizuzu engama-20 ide ifudumale ukuya kwiqondo lokugqibela. Basebenza kakuhle kakhulu kwiminqweno okanye ukuqhubela phambili izithole. Kulo nyaka njengesiqhelo bendifika emva kwexesha kokutyala izinto, kodwa hay. Sele ndinengubo kunyaka olandelayo. ndine uthenge le.
Nokuba ufuna ukuba yonke into ilawulwe ngokugqibeleleyo unokubeka thermostat enje, okanye wenze enye isekwe kwiArduino kunye nokudluliswa (yiprojekthi endiyilindeleyo).
Isikali seScoville senziwe nguWillbur Scoville ukulinganisa ubushushu beepepile. Uvavanya inani le-capsaicin, eliyinto ekhoyo kwizityalo zohlobo ICapsicum. Uyenzile ngovavanyo lwe-Organoleptic apho azame ukumisela umgangatho kwaye afumane indlela yokuthenga iimveliso ezahlukeneyo. Ngaphandle kwemida njengoko kusenziwa uhlalutyo lwe-organoleptic apho ukuthobela kwabantu kunye nemvakalelo yempembelelo yenkalakahla, kwakungaphambili.
Namhlanje (ukusukela ngo-1980) iindlela zohlalutyo lobungakanani ezinjengeNtsebenzo ePhakamileyo yeLiquid Chromatography (HPCL) zisetyenziselwa ukulinganisa ngokuthe ngqo isixa seCapsaicin. Ezi ndlela zibuyisa amaxabiso "kwiiyunithi zepungency okanye ubushushu", oko kukuthi, kwinxalenye enye ye capsaicin kwisigidi sepowder eyomileyo. Inani leziphumo zeeyunithi liphindaphindwe nge-x15 ukuguqula ukuya kwiiyunithi ze-Scoville Bekungayi kuba yimfuneko ukuya eScoville kodwa isenziwa ngokuhlonela lowo uyifumeneyo kwaye kuba iyinkqubo esele isaziwa ngokubanzi.
Iindidi ezahlukeneyo zohlobo zinokuqulatha iCapsaicin engaphezulu okanye engaphantsi, kodwa kwaneendlela zokulima kunye / okanye iimeko zemo engqongileyo zinokumisela ukuba itshilisi ishushu ngakumbi okanye iphantsi nokuba yeyodidi olunye.
Luhlobo lwe Capsicum chinense.
Ngaphakathi kwiihabanero kukho inani elikhulu leentlobo ezahlukeneyo
Imbewu kunye nokuhluma
Imbewu yeepelepele kunye nepelepele ingathatha ixesha elide ukuhluma, ngakumbi ukuba iqondo lobushushu alonelanga, kodwa ukuba silibeka ngaphezulu kweedigri ezingama-30 siyakuzifumana ukuba zihlume phakathi kweentsuku ezisi-7 ukuya kwezili-14, iimbewu zihluma kubonakale neembotyi .
Ngaphakathi kwe-capsicum chinense sifumana iintlobo ezahlukeneyo zepelepele. Ezona zaziwa kakhulu zezi Ipepile yeHabañero, la icayenne, i-ají panca kunye ne-ají limo. Apha okwethutyana siza kuthetha ngeeHabananeros ezo sizilima.
Uyenza njani inkantini ngethanga
Ukusukela ngehlobo elidlulileyo ndiyomisile ithanga (idipper gourd) , kulungile ndicinga ukuba ngumdibi. Iyafana ne- amathanga ehambo, kodwa ngolu hlobo lukhulu kakhulu.
Kwaye lixesha lokuba wenze into ngayo ;-)
Kuba ndigcine kuphela i-1 ndifuna ukuyisebenzisa njengenye inkantini yokuthwala amanzi. Ukwakhiwa kwayo kulula kakhulu. Kufuneka siyikhuphe kwaye siyikrwele.